🥇 ▷ Muuqaalkii ugu horreeyay ee ka soo baxa da 'yarta xilli ciyaareedkii labaad ayaa loo diiday Fortnite… ✅
Muuqaalkii ugu horreeyay ee ka soo baxa da ‘yarta xilli ciyaareedkii labaad ayaa loo diiday Fortnite…
Bishii Janaayo 27, muuqaalkii ugu horreeyay ee u muuqday mid xayeysiin u sameynaya xilli ciyaareedkii labaad ee ciyaarta ayaa ka soo madhxiyay Reddit. Si kastaba ha noqotee, waxaas oo dhan waxay noqdeen kuwo aan sax ahayn ka dib markii filter asalka ahi muujiyo Waxay ahayd daadinta beenta ah ee uu isagu sameeyay. Xaqiiqooyinka in kabadan hal ciyaartoy ka xanaaqay.
Shaandheynta ayaa dhacda subaxa Isniinta waxayna dhalisaa dhammaan qeyladaha digniinta si ay u awoodaan “hordhac” waxyaabaha ku saabsan xilli ciyaareedkii labaad. Xaqiiqdii, isticmaaleyaasha qaarkood ayaa su’aal ka keenaya sawirrada la daabacay maxaa yeelay kuwa kale waxay aaminsan yihiin inay run tahay, laakiin natiijooyinku waa iska soo horjeed.
Intaa waxaa sii dheer, meesha kama saarayo suurtagalnimada bulshada Fortnite Waxaad si fudud u seegi doontaa jagooyinkaas oo kale sababtoo ah fiiro gaar ah ayaa la siinayaa wixii macluumaad ah ee la xiriira ciyaarta xilli ciyaareedkii labaad. Xaqiiqdii, xogta hore ee daadatay waxay soo jeedineysaa suurtagalnimada in wax yar laga beddelo Xirmooyinka Steamy.
Dhanka kale, KinaKing, oo faafisay macluumaad been abuur ah, ayaa sameysay muuqaal video ah oo uu ku dhajiyay baraha bulshada “Reddit” isagoo sharraxaya sababta daadinta. Sababta loo dhajiyay muuqaalka gebi ahaanba khaldan waxay ahayd qayb ka mid ah tijaabadiisa si loo ogaado. “Sida dadku u falcelin doonaan” iyo sidoo kale ku raaxaystaan ​​ku saabsan.
Marka laga yimaado halkan, way iska cadahay in wax daadinta oo dhami aysan sax ahayn maxaa yeelay way baddali karaan ama, haddii ay ku guuldaraystaan, maahan run. Marka waa inay had iyo jeer sidan ahaataa hubi isha guud ee mawduucyada, maxaa yeelay dad yar oo rasmi ah oo dheeri ah ayaa bixin kara macluumaad ku saabsan horumarinta Ciyaaraha Epic.